အသစ်ဖန်တီးမှု - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-02 > အသစ်သောဖန်တီးမှု
Gott bereitete unser Zuhause vor: «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser» (1. ကြွက် 1,1-2) ။
ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်ကအာဒံနှင့်Eveဝကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးbeautifulဒင်ဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ စာတန်သည်ဤပထမလူသားများကိုလှည့်ဖြားခဲ့ပြီးသူတို့သည်သူ၏သွေးဆောင်မှုကိုခံလိုက်ရသည်။ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုပရဒိသုမှနှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကသူတို့ဘာသာသူတို့လောကကိုစတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
ငါတို့သိသည့်အတိုင်းလူသားအားလုံးကိုလူသားအားလုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ဤစမ်းသပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်အတွက်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်။ ဘုရားသခင့်အမိန့်တော်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဘုရားသခင်သည်သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏မှောင်မိုက်သောကမ္ဘာသို့စေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။
«Es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und liess sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen» (Markus 1,9-11) ။
ယေရှုနှစ်ခြင်းခံချိန်တွင်ကောင်းကင်မှအသံတစ်သံသည်ဘုရားသခင့်စကားများကိုကြွေးကြော်ပြီးယေရှုအားသားတော်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံခဲ့သည်။ ယေရှုအားစိတ်အားထက်သန်ကြောင်းအဖေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သည် သူသည်စာတန်ကိုလုံးလုံးငြင်းပယ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုမလျှော့ဘဲခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ သူသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းနှင့်ဒုတိယမြောက်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ကတိတော်အတိုင်းမပြည့်စုံမှီတိုင်အောင်သူအားယုံကြည်ခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံခံပြီးသည်နှင့်ယေရှုကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသဲကန္တာရတွင်မာရ်နတ်ကိုဆီးတားရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်Eveဝတို့နှင့်မတူဘဲယေရှုသည်ဤလောက၏မင်းသားကိုအနိုင်ယူခဲ့သည်။
ယာယီဖန်တီးမှုအသစ်သည်အရာ ၀ တ္ထုအသစ်ကိုအပြည့်အ ၀ ရောက်ရှိရန်အတွက်သက်ပြင်းချပြီးမျှော်လင့်သည်။ ဘုရားသခငျသညျအလုပ်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှု၏လူ့ဇာတိခံခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာထဲသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအတွင်း၌၎င်းမှတစ်ဆင့်သင်ဤအသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးထာဝရတည်မြဲနေလိမ့်မည်။